Faharendrehana :: Telo lahy iray tampo niara-maty an-drano • AoRaha
Rendrika ny lakana kely nitondra lehilahy dimy tany amin’ny reniranon’i Vodiriana, any amin’ny dimy amby roapolo kilaometatra miala an’i Maroantsetra, tamin’ny harivan’ny alatsinainy lasa teo. Namoy ny ainy ny telo lahy, izay mpirahalahy iray tampo avokoa.
Hita faty, tamin’ny talata, ny iray. Omaly maraina no nahitana ny razana roa. Avotra, tamin’ny fotoana nisehoan’ny loza, ny lehilahy iray sy ny mpivoy lakana niaraka tamin’izy ireo.
Fantatra fa avy aty an-drenivohitra nidina tany Maroantsetra satria nikasa hamaky vato ireto lehilahy efatra tra-doza teny ambony lakana ireto. Manodidina ny roapolo taona sy telopolo taona izy ireo. Teny an-dalana hamonjy fodiana hariva tany amin’ny tanàna nivantanany izy efa-dahy no niharam-boina, tokony ho tamin’ny fito ora hariva. Miampita rano vao tonga any an-tanàna. Nandray lakana kely iray teo amoron-drano ireo andian-dehilahy.
«Dimy ry zareo no niaraka tamin’ilay lakana kely, dia izy efa-dahy sy ny mpivoy. Tsy fantatra ny tena antony naharendrika ny lakana, na mety ho noho ny vesatra na zavatra hafa. Nilentika ny lakana, rehefa teo amin’ny metatra vitsy miala ny sisin-drano», araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandarimaria, any Maroantsetra.
Sahabo ho dimy metatra ny halalin’ny rano teo amin’ny faritra nisehoan’ny loza. Nilentika izy telo lahy mpiray tampo. Afaka nanavotra aina ny roa lahy. Iretsy farany no nampandre ny mponina tany an-tanàna. Nanomboka tamin’io alina io ny fikarohana azy telo lahy. Nitohy ny maraina izany ka niara-nisalahy ny fokonolona sy ny zandary. Hita faty voalohany ny lehilahy iray. Roa andro taty aoriana no hita ny vatana mangatsiaka roa.
Efa natolotra ny fianakaviana ireo razana telo. Efa vita ihany koa ny fizahana nataon’ny mpitandro filaminana tany an-toerana.
Fakana an-keriny :: Nifampitifitra ireo jiolahy sy ny zandary
Fisandohana :: Roa lahy sy roa vavy tratra nisoloky tamina varotra merkiora